Kudzidzisa & Zvigadzirwa
Kuremekedza - kubudirira kuri nyore!
Taura zvishoma, taura zvimwe
Bhuka musangano wezano
Kubudirira kwako kwatove mauri ...
Kuremekedza isimba remashiripiti rinoita zvishamiso, piritsi rechishamiso rekubudirira, uye hazvinzwisisike kuti isu tese taive nezvidzidzo zvechikoro mune iyi nyaya yakakosha kubva mugiredhi rekutanga.
Ndokusaka ndanyora bhuku iri kune vese vakaita seni, vakaedza kwenguva refu uye vachiri kusaenderera mberi sezvavanoda uye vanokodzera.
Mu "Kuremekedza - kubudirira kuri nyore kwazvo" Ini ndinokuratidza mashiripiti fomula, ndinokuratidza kuti zvinogara sei zviri nyore uye nyore kusvika kumusoro, kune rako rese-kutenderera kubudirira uye kubatsira kwemunhu wese.
Kumbira bhuku remahara izvozvi
Ruremekedzo runoshanda sei, zviri nyore sei isu kuti tiunze ruremekedzo rwakawanda muhukama hwese uye nemabatiro akanaka uye nekukurumidza anoshanda - ndizvo zvandakatsanangura mubhuku.
Kana iwe wakaita seni, usingashiviriri uye wakazvipira, uye urikutsvaga kubudirira, saka kudzidzisa kunogona kungova chinhu chako ... Ine chipangamazano padivi pedu, haisi yekukurumidza chete uye yakapusa, inodawo zvakanyanya kuyedza & kukanganisa.
Zvitsvagire wega mune yemahara 45 maminetsi echirongwa kutaura neni. Nguva imari, vanodaro. Asi kupfuura izvozvo, pane mukana wemubhadharo, mutengo wekuregeredza, kunonoka, kunonoka, kurasikirwa kwekurasikirwa. Zvinodhura zvausingakwanise kuona uye kubata uye izvo pakupedzisira zvinotidhurira zvakanyanya.
Tsvaga musangano wakasununguka wakasununguka neni ipapo - ndiri kutarisira!
Yemahara 45-min. Bhuka musangano wezano
Kuremekedza - kubudirira kuri nyore
Iwe uri muzvinabhizimusi, unozvishandira wega wega kana mhizha?
Iwe unoshanda zvakanyanya uye kurota kwekungova nemhepo yakawanda?
Iwe unoshuvira kuve nekukwanisa kuzadzisa zvirinani mitengo uye yakakwira fizi yemabasa ako epamusoro pamusika?
Kana iwe unongoda kuti zvinhu zvive nyore, zvirinani uye zvinonakidza?
Ipapo iwe unofanirwa kurega rimwe remasimba akasimba ariko kukuitira iwe - pane kuti uise simba risingaperi muzviitiko zvako.
Ndinotaura zvekuremekedza. Yechokwadi, kuzviremekedza chaiko iwe nenzvimbo yako. Uchashamisika nezviri kuitika. Zviri nyore, nekukurumidza uye zvirinani ...
Vashoma chete ndivo vakazviziva.
Kuremekedza ndiyo kiyi - uye UNOFANIRA kuishandisa izvozvi. Kubatsira kwevatengi vako, yako mhuri uye iwe pachako.
Ruremekedzo ingangodaro simba rakadzikiswa zvakanyanya munharaunda yedu. Takadzidza zvishoma nezvazvo kuchikoro, ndoda kungonzwisisa mashandisiro ekushandisa rukudzo muhupenyu hwezuva nezuva kubatsira munhu wese anobatanidzwa.
Ini ndakangozviona izvi ini mushure memakore mazhinji muchiitiko ichi, uye mudzimai wangu aipfuura kamwechete chiremba wechiremba uye mudzidzisi wangu panguva imwe chete.
Uye chinhu chinoshamisa ndechekuti: ruzivo chete harugone kukwana.
Kunyangwe mushure mekunge ndatenda kuti ndanzwisisa chirevo ichi, zvakatora makore ekudzidzira uye kunyorera kuti uwane ruzivo rwakawanda pamusoro pekukoshesa nekuremekedza, kuti unzwisise maitiro ari kumashure kwayo.
Wese munhu anogona zvirokwazvo kuita zvakafanana, kuzviwanira ivo - uye kuisa hafu yehupenyu hwehunyanzvi pazviri ...
Asi kana iwe usine moyo murefu, uchida kuziva, uye uine nzara, seni, ndichafara kukuratidza chirevo. Zviri nyore kwazvo ...
sezvinoita vana vadiki: zviite kutanga - wobva wanzwisisa.
Uye zvaunokwanisa kuita, nhanho nhanho, ini ndichakuratidza uye ndichave ndinofara kukuperekedza. Kana uchida. Zvinoshamisika zvakavimbiswa, kubudirira kunoitika pasina kusiiwa.
Sign up kune yemahara nzira taura neni uye tione zviri kuitika newe. Ndiri kutarisira kukuziva iwe pachako.
JT Foxx Chicago - Ruremekedzo ndiyo Hwaro hweZvose
Kwete. 1 bhizinesi murairidzi, serial muzvinabhizimusi, zvivakwa uye akazvimirira investor, JTFoxx pasimba reruremekedzo uye ruzivo rwake naJugengen pachiitiko chemabhizimusi chemazuva mashanu muLondon.
Patrick, wechidiki muzvinabhizimusi, 8: 1 kudzidzisa kwemavhiki masere.
Ndakawana yangu miganhu, ndakagadzirisa pfungwa dzangu, ndakawedzera kuzvivimba, ndikawana maonero matsva ndikaunza bhizinesi kumberi. Yakanga yakakodzera, yakakurudzirwa.
Irem, mudzidzi wezvemitemo uye anotarisira kushambadzira uye vezvenhau vezvemabhizimusi vezvemakambani nezve zoom coaching neJuergen, pakati penguva yeCorona.
International Manzwi Ekuremekedza
Kubvunzana pa "Remekedza" kutenderera pasirese muna 2019 na2020.
Fred Fishback, CEO weJavelin Industries - Kuremekedza
Kuremekedza - chimwe chinhu chakakosha uye chinodiwa nhasi.
Pfungwa yekuremekedza ndeyekutanga, ndizvo zvaunofanira kutanga wadzora.
Tinoda iko kureruka kwepfungwa iyi.
Ndinofunga iwe uri pane chimwe chinhu chakakosha uye ndiri kufara kwazvo nezvauri kuita Juergen.
Kuremekedza ndiyo hwaro hwehukama hwedu,
ruremekedzo ndiyo hwaro hwekuzviremekedza,
rukudzo ndiyo hwaro hwekuwedzera kukura.
Ndiri kufara chaizvo zvauri kuita, ipfungwa ine simba kwazvo.
Musangano muLondon Yakakurumbira Law Society
Abridged kubvunzurudzwa nezve "Kuremekedza" pane Bhizinesi Musangano 2020 muLondon inozivikanwa Mutemo Society.
Remekedza Hurukuro Hilton London Metropole
Yakapfupikiswa "Kuremekedza" Kubvunzana 2020 muHilton London Metropole Lobby
Ndine chikwereti naye zvakawanda, anoisa zvese muzvirongwa zvemwoyo wake, akavhurika pasirese uye haatyi shanduko, kwete kutya matambudziko ... Mumwedzi mitanhatu yandamuziva, akatondibatsira zvakanyanya mukufunga kwangu pachezvangu, uchaenda chete kunze uko pamwe chete nekuwedzera.
Nhengo nharaunda ne DigiMember